Taarikhda Maysooniyad Qaybta 1aad - Land Of Punt
Siloofahmo maanta waxa kadhacaya Bariga Dhexe (Middle East Countries) waxaynu ubahannay inaynu kayarabaxno siyaasada muuqata, jaleecnona siyaasada qarsoon iyo taarikhda kusoo arooraysa Bariga DHexe ilaa qarniyo. Waxaynu sooqadanayna labo arimood oo kala ah urur soo jireenah Freemaysanka (Freemasonry) iyo fakarkooda (New World Order) oo looturjimikaro talo iyo nadaam cusub oo loosameeyo aduunka laguna maamulo. Yaa fakarkan iskale? Maxayse ulajeedan? New World Order (NWO) kamay bilaamin ingiriiska iyo taarikh dhow midna lakinse waa arin gunteedu fagtahay soona taxanayd wakhti dheer ciriq raacidkeduna kulagalaayo qarnigii 2300 -12000 BC baabiloon iyo wakhtigii fircoon.
Maysooniyadu taarikhdooda waxay ku arooriyan wakhtigii nabi Suleiman (970–931 BC) wakhtigii dibu dhiska lagu waday masjidka ku caanbaxay nabi suleman (Temple of Solomon) ee Jerusalem. Taarikhda maysooniyadu waxay tilmaamay inuu uu nabi Suleiman samada (ilaahay) lagasoo amray oo uu dibudhis iyo dayactir kusameeyo masjidka barakaysan. Waxay tarikhdoodu sheegay in wakhtiga dhulka barakaysan “Holy-land” aan farsamayaqaanku ku badanayn oo looga baahday in shaqaale farshxanyihiina oo dibucasriyeeya masjidka Suleiman lakeeno. Waxaa iska kaashaday dibushiska xulufadii suleiman ee kunoolayd nawaaxiga dhulka barakaysan iyo ciidamo samada lagasoo diray. Shaqalaha farshxanka waxay kasoo jeeden qabiilka finooshiyan “phonecian” oo ah qabiil sematik asalkoodu yahay. Waa qabiilka soosary xuruufta aynu isticmaalno ee looyaqan latin alphabet ee qoraalkanu ku qoranyahay.
Finooshiyankii waxay nabi Suleiman usoodiren shaaqale uu kujiro nin loogu magac daray Hiraam Abiff oo khabiirku ku ahaa dhisida iyo qurxunti dhismayaasha waa ninka loonisbeeyo inuu leeyahay dhisida masjidka Suleiman. Hiram kaliya cilmigiisu kumuu koobnayn dhisida waxuu ahaa nin haybad leh oo samaawiya oo ay aminsanyihiin inuu ka dubaalad dheeryahay nabi Suleiman oo uga dhawaa samada. Waxay kutilmaaman Hiram inuu ahaa nin ilaahay suleiman usoodiray lakinse toos uga amarqaata samda use caawinayey oo ka barbarshaqaynayey nabi Suleiman oo garab iyo gaashan baa u haa oo furaha sirta boqor Suleiman ayuu hayey. Hiram waa ladilay waxaana dilay shaqaalihii kale oo ku qabsaday inuu furaha sirta kusoo wareejiyo lakinse Hiram wuu la godgalay sirtii uu hayey. Hiram markay amanayaan ee ka sheekaynayaan cilmigisa iyo awoodaha samaawiga ah ee uu leeyahay waxay sooqatan wakhtigii boqoradii Sheba “Saba” iyo nabi Suleiman kulmeen, waxay tarikhdooda ku daran in markii Sheba soogadhay qasriga uu kataliyo Suleiman iyo Templeka soojitay indhaha boqorada kana yaabtay dhismayaasha iyo qasriga loodhisay boqor Suleiman.
Waxay waydisay cida udhistay qasriyadan aan hore loo arag waxayna nabi Suleiman kacodsatay inuu horkeeno shaqaalihii dhisay Templeka. Boqor Suleiman wuxuu isguyeedhay shaqalihi caadiga ahaa ee xukunkisa hoos imanayey lakinse shaqaalihi samaawiga aha ee ka amar qadanjiray Hiram umay iman, wuxuu Boqor Suleiman uyedhay Hiram oo ku yidhi waarbal nimankii kale sooxadiri. Hiram ayaa isuguyedhay shaqalihii samaawiga ahaa waxayna Sheba ogaatay ninka wakilka rasmiga ah ee samda matala inuu yahay Hiram, indho jacaylna way ku eegtay isla Hiram. Hiram wuxuu u waxyooda maysooniyada oo sirtii samawiga ahayd ee nabi Suleiman lawadaaga, waxay sheegtan inuu asaasihii koobad ee ururka shadanka caabuda ee maysooniyada yahay.
Maysooniyadu nabi Suleiman way ku ladhanyihiin oo tarikhdooda meelsha dhexe ka alifeen ayey ku dabakhaan si loo amino fekerkan ay faafiyan, waxay aminsanyihiin inay yihiin dadkii qarni ilaa qarni gacanta ku hayey cilmiga Hiram wuxuuna soobixidona wakhtiga ay gacanta ku hayaan dhuka barakaysan magaalo madaxna utahay Jerusalem. Kalmada maysan “Mason” asalkeeda waxaa loogu yeedha shaqalaha muruqmaal ah khasatan wastaadka jaajurka dhiga. Hiram baa wastaad ahaa oo cilmiga khuseeya dhisida iyo ingineerinka inookenay, waxaa lagu xusaa oo lagu soo halqabsadaa “master” derajada sadexaad ee maysooniyada waxaa lagu qaata darajada master. Lakinse “Master Mason” waa Hiram waa halka ay kalamada “Master Degree” ku aroorto ee jaamacadaha lagu qaato ardayda ka qalinjabisa “master degree” loo xidho koofiyad madow oo afar gees leh, waa bir afargees leh oo sibidhka ku qaato wastaadku.
Maysooniyda tarikhdooda dhabta ah ee ay nabi Suleiman dusha kasaaren kuma eeka halkaa lakinse waxay kulagalay wakhtigii Fircoon iyo ilaa Baabilooniyankii, Numruud. Maysooniyadu waxay aminsayihiin ina samada lagadoortay oo biniadamba iyagu kamasuul yihiin oo habeen iyo maalinba iskusi waxu arkaan. Waa urur soojiran ah oo ku fiday dunida, waa urur lashaqaysta shaydaanka iyo shayadiinta (jinka) oo adeegsada cilmigii Harut iyo Marut. Waa urur awooda saara inay bulshada hagaan oo fakaartoda lagu shaqeeyo intabdana waxay awooda saran siyaasada oo dawladaha iyo dhaqaalaha ayey qabsadaan. Inakoo aan sookobi Karin tarikhda ururkan hadafka qarsoon leh waxaynu isku dayeyna inaynu tarikhdooda meelo cayiman kasoo qadano. Wakhtiga milaadiga Eurub waxaa xukumijiray oo gacan bir ah ku xukumijiray Kiniisada iyo wadaadka baadariga Pope Erwin II. Pope Erwin II waxuu go’aan ku qaatay inuu soo celiyo dhulkii ama magaaladii barakaysnayd ee Jerusalem kanasoo celiyo Muslimiinta. Sababta Pope Erwin ku goansaday inuu kuduulo dhulka barakasan qabsadona Jerusaleem tarikhdu waxbadan bay iska waydisa, Erwin wuxuu baadari uyahay kristanka garabka katooliga oo iyagu aan tarikh kulahayn dhulka barakasan iyo Jerusalem.
Waxay taarikhdu xustaa ina loo waxyooday oo lagu amray inuu gacanta ku dhigo magaalda Jerusalem. Abaabulkii uu kula dhexdhacay Eurubta galbeed iyo muusanowgii waxuu ugu magacdaray dagaalka iskutalababta “War of the Cross”, Krusaydarkii koobadna “First Crusade” wuu istaadhmay. Gacan ku hayntii Muslimiinta ee magaalada Jerusalem ilaa 637 milaadiga waa lasoo afjaray. Kufsi, dhac, dil iyo boob intaba Pope Erwin II wuu xalaaleeyey. Taarikhdu waxaay tidhaahdaa dhigii magaalada barakaysan lagudaashay ee cidamada baadarigu ilaa fardaha jilbahooda buugaadhay. Kiristan sunniga ahaa, muslimiin iyo yahuudaba cagta ayaa lamariyey. Dagaalki lagula wareegay Jerusalem iyo waxaayaabihii kadhacay goobtas ayaa loo nisbeeya inay kadanbeeyen cidamada masjid Suleiman “The Knights of Templars of Solomon ama Knight Templars” oo ahaa cidamo sigaara utababaran.
Waxay ahaayen wadaado shanbadii baadariga sita oo dagaal yahamiina halkii nin toban nin iyo inkabadanba wadada ayuu marinayo. Waxaa tarikhdu sheegay inaanayn kabadnayn 300 oo nin. Night of Templars waxay ahaayen labeenti cidamadii iskutalaabta ee Krusaydarka, waxayna ahaayeen hogaamiyayaashi gaarka ahaa ee cidamada dagaalgalinayey. La wareegi ay lawareegen Jerusalem nimankan wadaadada ahi waxay toos abaaren oo lawareegen goobtii saldhiga uhayd labadii Nabi ee muminiinta ahaa ee isdhalay, Daa’uud iyo inankiisi Suleymaan(cs) waa goobta uu ka dhisanyahay Tempalku kuna yaal majid Al-Aqsa. Taarikhdu waxay xustaa in sababta ay markiiba ulawareegen Masjidka “Solomon’s Temple” waxay raadinayeen kartuunki barakaysnaa Tabut “The Ark of Covenant” ee anbiyada reer bani Isreali haysanjireen lagasoo bilaabo Muuse (cs) ilaa nabi Suleimaan (cs) ee ay xukunka ku haysteen kuna dagaalgalijiren. Sidaynu korkusoo xusnay magaca ay siteen wuxuu ahaa “The Knights of the Templar of Solomon ama The Knights Templars, ilaaliyaashi masjida Nabi Suleymaan. Lakinse nabi Suleiman majidkisa cidi umadirane waxay ahaayen nin hadaf fog oo qarsoon ku shaqaynaya oo awoodo garaa wata oo sooc ah, marka hore wadaado badiriyiin oo magaca nabi ciise ku dagaalama marna waxay ahaayen dagaal yahano haysta tababarkii ugu danbeeyey oo hawl aan lala ogayn wada. Ilaaliyaasha Masjidka Suleymaan oo markiihore diinta Kristanka ayey dabada kuhayey barakadii baadariga Erwin way haysteen lakinse waxaa bilaabmay inay marba marka kadanbaysa kala fogaadan kiristanka oo khuraafadkale oo ay hoosta ku hasten lasoo baxaan kana kaleexdaan dhabadii Kiniisada una leexdaan buuga Kabala iyo sixirka Yahuuda.
Dagaalo farabadan kabaci oo dhexmaray iyaga iyo muslimiinta jabkii ugu weynaa waxaa gadhsiyey Salaxudiin Ayuubi oo kala wareegay Jerusalem iyo majid Al-Aqsa. Ilaaliyaasha Masjidka Suleymaan firxidkoodi waxay galeen Eurub gar’ahaan waqooyiga Eurub; Malta, Switzerland, Italy iyo Fransiiska. Ilayn waa ninman meelsare Kiniisada ugu jiray guulobadana usoo hooyay waxbadan oo xaraanka ka ahaa diinta kiristanka baa loo xalaaleyey. Waxay ahaayeen ragii/ururkii kaliya ee Kiniisadu u xalaalaysay inay ribadda ka ganacsadaan oo lacagta lacag kasameeyan. Ilaaliyasha Templka Suleiman waa ragii hindisay in lacag bangi ladhigto wayna hirgasho waxayna ku noqdeen tujaar heer ay gaadhan inay ilaa boqortooyinka Eurub lacagaha amaahiyaan oo saamayn weyn ku dhexyeeshan Yurub. 1037 milaadiga ayuu mashruucu kasoo afjarmay waxaana kusoo jeestay indho badan oo bulshadii reer Yurub ah waxaa la ogaaday in dhaqaalihiba gacanta dhigeen, kitaabki baybal ee lagu xurmaynayeyna marhore tuuren, hadafkoodi qarsoodiga uhaa baa fashilmay.
Boqorkii Fransiiska Philip ayaa ku horbilaabay dacwado badan buu kusoo ogay inay shadaynka caabudan oo kaleexden wadadii kiristanka ayuu ka kabilaabay. Waxaa ku raacay oo wadadii boqor Philip isna maray Pope Claymont V wuxuu kusoo oogay inay beeniyeen Nabi Ciise, ragii faraxumeeyen sanab iyo sixir caabuden. Danbiyadii ugu daraa ee qof bini’adama lagusoo ogo wakhtigaa ayuu baadarigu kusoo oogay ilaaliyasha Templka Suleiman. Hogaamiyahoodi Chekthemolay iyo intii laqabqabtayba iyagoo nool baa lagubay maalkoodina kiniisada ayaa lawreegtay. Intii kabadbaaday gacantii boqor Philip waxay farxadkoodi soogaleen Scotland oo markaa dagaal kulajirtay Ingiriiska magacii looyaqaanay ee Knights of Templars way badaleen waxayna qaaten magaca maysooniyada “Freemasonry”